Nofonjain’i Koety Noho ny Faniratsirana Mpitondra Ao Amin’ny Firenena Ilay Mpikatroka Sara Al-Drees · Global Voices teny Malagasy
Nofonjain'i Koety Noho ny Faniratsirana Mpitondra Ao Amin'ny Firenena Ilay Mpikatroka Sara Al-Drees
Voadika ny 03 Oktobra 2016 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Magyar, Español, English
Ny Mpanjakan'i Koety. Sary: “Tribes of the World” avy amin'ny Flickr. (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ny 26 Septambra, nandidy ny fitazonana ilay mpikatroka Sara al-Drees mandritra ny 21 andro noho ny sioka heverina ho “manivaiva” ny Emira, mpanapaka ny firenena, ireo manampahefana ao Koety. Nitodika tany amin'ny manampahefana ilay mpikatroka ny alahady rehefa avy namoaka didy fampisamborana azy ny biraon'ny fampanoavana .
Sara al-Drees. Sary avy amin'ny Twitter.
Mpampianatra i Al-Drees, mpikatroka mpanohana ny demokrasia sady mpisera mavitrika ao amin'ny Twitter manana mpanjohy 178 000. Nisioka sy nanoratra mikasika ny zon'ny vehivavy, ny zon'olombelona ary ny fampahoriana ara-politika ao Koety izy.
Miatrika fiampangana izy noho ny fanehoan-kevitra nataony tao amin'ny Twitter momba ny famindram-po azony tamin'ny fisaziana tany am-ponja teo aloha, sy noho ny faniratsirana ny Emira ihany koa. Tamin'ny 17 Jolay 2013, nanome sazy azy 20 volana an-tranomaizina ny fitsarana miaraka amin'ny asa an-terivozona, noho ny sioka mitsikera ny fianakavian'ny mpanapaka ao amin'ny firenena sy ny famoretana nataon'ny governemanta tao an-toerana tamin'ny hetsi-panoherana tamin'ny 2012. Nahazo famelana avy amin'ny Emira izy ary navoaka tany am-ponja tamin'ny 30 Jolay tamin'io taona io ihany. Na izany aza, tsy nifarana teo ny olana ara-pitsarana. Mety hiditra am-ponja izy ankehitriny noho ny fiampangana mitovy amin'izany ihany noho ny sioka nalefany tamin'ny Septambra tamin'ity taona ity. Naneho hevitra momba ny famindram-po azony i al-Drees tao amin'ilay sioka sy namaly ireo tsikera izay milaza azy ho velom-pankasitrahana ny Emira taorian'ny famindram-po azony.
rehefa nomena famindram-po aho ary navoaka ny fonja, dia nilaza tamiko foana ireo tsy mahalala na inona na inona nandritra ny herintaona hoe: “tokony ho velom-pankasitrahana izay namindra fo taminao ianao”. Isaky ny manoratra aho dia hoy izy ireo hoe: “tsy mibebaka angaha ianao?”. Meloka aho izao, satria namindra fo tamiko izy
ary tsy tokony nigadra aho aloha voalohany indrindra. Nahoana izahay no nampidirina am-ponja tsy ara-drariny… noho ny fomba fijery! Ary avy eo omena famindram-po ny voageja tahaka ny hoe meloka izy .
Tamin'ny volana Novambra 2015, nosamborina ihany koa izy mikasika ny sioka noheverina ho “nanivaiva ny mpaminany Muhammad”, izay heloka bevava mety ahazoana sazy hatramin'ny folo taona an-tranomaizina miaraka amin'ny asa an-terivozona ao Koety. Na dia afaka madiodio tamin'io fiampangana io azy aza i al-Drees tamin'ny fiandohan'ity taona ity, dia mety hiditra am-ponja indray noho ny faniratsirana ny Emira, izay heloka bevava mety ahazoana sazy hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina eo ambanin'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena.
Naneho hevitra momba ny fanorisorenana ara-pitsarana mahazatra azy i al-Drees sady nisioka tamin'ny 19 Septambra hoe:
Semporiny ianao ary ataony izay tsy hanananao hery intsony amin'ny fandimbiasany raharaha ara-pitsarana isan-karazany mandrapahatonga anao hiahiahy momba anao, ka reraka amin'ny fisedrana mahazo anao. Ka dia kivy ianao ary mitsahatra tsy mitolona intsony. Rehefa mitsahatra ianao dia azony izay tadiaviny ary tratrany ny tanjona
Ao Koety, tsy misy olona afa-miala amin'ny fanenjehana ara-pitsarana rehefa mitsikera ny Emira sy ny fianakavian'ny mpanapaka. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity niampanga an'i Sheikh Sabah Al Abdullah Salem zafikelin'ny rahalahin'ny Emira ny fitsarana tamin'ny faniratsirana ny fianakavian'ny mpanjaka mitondra ihany. Voaheloka higadra telo taona an-tranomaizina izy ary nasaina nandoa lamandy 16.500 $ Amerikana noho ny famoahana hafatra Snapchat mitsikera ny governemanta, izay tarihin'ny mpikambana iray ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka, ary ny fianakavian'ny mpanjaka no mihazona ny ankamaroan'ireo toerana manan-danja ao amin'izany. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nampidirina am-ponja noho ny faniratsirana ny Emira ireo mpikatroka mpanohitra am-polony , anisan'izany ny mpikambana ao amin'ny parlemanta teo aloha. Tamin'ity vanin-taona mafana ity, neken'ny antenimiera ny fanitsiana ny lalànan'ny fifidianana mandràra ireo voaheloka tsy ho afaka hilatsaka hofidiana.